250A Cable Ngwa Ngwaahịa & Ndị Nweta | China 250A USB Ngwa Factory
25kV 250A Kwụ Ọtọ njikọ
Anhuang ọkachamara na Nnennen njikọ, anyị na-enye elu àgwà Kwụ Ọtọ njikọ. Atụmatụ: ● Na-enye njikọ juputara na nkewa zuru oke nke ekpuchi ekpuchi mgbe ejiri ya ma ọ bụ plọg kwesịrị ekwesị. Point Oghere ule capacitive arụpụtara iji chọpụta ọnọdụ sekit ma ọ bụ wụnye ihe ndapụta. Requirements Onweghi oge achọrọ ịhapụ. Ing ingrịgo elu nwere ike ịdị n ’elu, n’ ihu ala, ma ọ bụ n’akụkụ ọ bụla n’etiti ya. Ngwa: • Maka njikọ nke polymeric cable na ntụgharị, switchgear, Motors ...
25kV 250A Ibu agbaji Ikiaka njikọ
Anhuang ọkachamara na Loadbreak Elbow Connector, anyị na-enye ezigbo mma Loadbreak Elbow Connector. Atụmatụ: l Na-enye a n'ụzọ zuru ezu ekpuchi na n'ụzọ zuru ezu submersible separable njikọ mgbe mated na kwesịrị ekwesị bushing ma ọ bụ plọg. l Wuru na-capacitive ule mgbe iji chọpụta circuit ọnọdụ ma ọ bụ wụnye a kpatara egosi. l Ọ dịghị ihe kachasị mkpa ịchọrọ. l arịọnụ nwere ike vetikal, kwụ, ma ọ bụ ọ bụla n'akuku n'etiti. Ngwa: l N'ihi njikọ nke polymeric cable ka nkesa, swi ...
25kV 250A gwara mmanụ okpu
Anhuang ọkachamara na mkpuchi mkpuchi mkpuchi, anyị na-enye ezigbo mkpuchi mkpuchi mkpuchi dị elu. 25kV 250A gwara mmanụ echebe okpu bụ ihe ngwa ngwaọrụ e electrically mkpuchi na n'ibu mechie bushing inter ihu. Mgbe mated ka a ibu ezumike ngwaahịa na igbapu waya na mmasị na ala, na gwara mmanụ okpu okpu enye a n'ụzọ zuru ezu echebekwa, submersible egbochi ihe mkpuchi maka ume bushings. The gwara mmanụ echebe Cap ike ga-eji na-adịgide adịgide ma ọ bụ nwa oge ...
25kV 250A gbasaa ngwa ngwa na uwe mwụda
Anhuang ọkachamara na ogologo ngwa ngwa, anyị na-enye ogo dị ogologo ngwa ngwa. Okwu Mmalite: 25kV 250A ngwa ọrụ na-enye interface maka njikọ 200A USB na nke a na-ejikarị ya na ngwa mmanụ-mmanụ (R-temp, hydrocarbon, ma ọ bụ silicone), gụnyere ndị na-agbanwe ọkụ, ndị na-agbanwe ọkụ, na ndị na-arụ ọrụ. A na-akpụzi ngwa ngwa eji eji Epoxy Rubber dị elu, mezuo ihe achọrọ nke ọkọlọtọ EN50180 / EN50181 DIN47636 / HN52-S-61. Ihe ndi ozo: arat Ngwa bushi ...
25 kV 250A ngwa ọrụ
Ọkọlọtọ: ● DIN 47636-7-1990 Ike USB na cones ndọtị, nkewapụ, yana Um n'okpuru 35kV Sub-connector device size · ● Ngosipụta Semiconductor Sheaths maka High - Voltage Cable Fittings na Detachable Insulated Connectors; IEEE. Cab IEC60502 Cable eletrik ndị a gwara mmanụ nwere voltages elekere site na 1 kV (Um = 1.2 kV) ruo 30 kV (Um = 35 kV) na mgbakwunye; IEC61442 Testzọ nyocha maka ngwa maka eriri ike na voltages gosiri na 6kV (Um = 7.2kV) na 30kV (Um = 35kV); GB GB 12706-2002 Extruded m ...